Saxeex - Saxeex Elektaroonig ah oo Wareeg ah - dhaqso badan oo aamin ah
Sidee ayey u shaqaysaa 'SimplySign'?
Waxay ku tahay ganacsigaaga inaad ka dhigto mid dhakhso badan oo badbaado leh
Fudud, sahlan oo dhaqaale
saxeex elektaroonig ah
Aalad shaqo casri ah
daqiiqad kasta ayaa la tirin karaa
'SimplySign' wuxuu kuu beddeli doonaa taleefankaaga casriga aalad shaqo casri ah, taas oo aad ugu mahadcelin karto sida ugu dhakhsaha badan uguna habboon ee aad u saxeexi karto dhammaan waraaqaha elektaroonigga ah haddii aad adigu iskaa saxeexdid. Tani waa adeeggii ugu horreeyay ee noocan ah ee lagu bixiyo suuqa Polish
Waxay ka shaqeysaa Smartphone / Tablet / PC
Waxay u shaqaysaa iyada oo aan haysan kaarka jirku
Waxay ka shaqeysaa aalado badan Windows / macOS / Android / iOS
La jaan qaada saxeexa eP Saxiixa
Xaqiijinta macmiilka adag
Awoodda is dhexgalka adoo adeegsanaya API-ka
si toos ah ayaa looga aqoonsan yahay barnaamijka Adobe adduunka oo dhan!
DIIWAANKA iyo badbaadinta
Waxaa loo diyaariyey wadashaqayn lala yeesho nidaamyada xafiiska iyo maamulka
Taageerada codsiyada suuqyada muhiimka ah: (tusaale ahaan, Barnaamijka Bixinta / e-Dejinta)
loo maro Adobe
KU SOO DHAWAADA / baahiyahaaga
Qalab kasta oo aan lahayn akhristaha iyo kaarka
Saxeexaaga gaarka ah, astaan ​​qarsoodi ah
weligiis nabad ma uusan aheyn
SimplySign wuxuu taleefankaaga casriga ah u rogi doonaa qalab shaqo oo casri ah. Saxeex cusub oo aqoon leh oo shaqeeya iyada oo aan haysan kaarka jireed iyo akhriska, labadaba aaladda moobiilka iyo kombiyuuterka caadiga ah.
Waxay u shaqaysaa si waafaqsan adeegyada muhiimka ah
Shahaadada Aqoonta leh ee loo yaqaan 'SimplySign' ayaa loo isticmaali karaa bixiyayaasha tabarucayaasha ZUS si ay u saxeexaan caddeynno, in loo diro e-Baahiyo ama JPK loo gudbiyo ZUS, marka la gabagabeeyo heshiisyada sharciga madaniga ah, in la saxiixo qaansheegyada elektarooniga ah.
Suurtagalnimada is dhexgalka iyadoo la adeegsanayo API
Is dhexgalka adiga oo adeegsanaya API, mahadsanid taas oo aad ku xiriirin karto nidaamkaaga shakhsiga ah ee IT-ga ee aagga saxeexidda dukumiintiyada leh saxeex elektiroonig ah oo aqoon leh - hal saxiix riix. (API-Programming Interface-ka Interface-ka wuxuu u oggolaanayaa codsiyada in ay wada xiriiraan.)
Xaqiijin 2-qodob oo adag
Xaqiijinta 2-qodobka micnaheedu waa adeegsiga furaha sirta ah ee waxa aad taqaan iyo qeybta labaad ee waxa ay tahay inaad gasho. Adeegsaduhu wuxuu geliyaa isagoo galaya furaha sirta ah, waxaana ku xiga tiro xarfo ah oo lambarro ah oo la sameeyay maalin iyo waqti gaar ah. Macmiilku wuu galayaa markii lambarka sirta ah iyo xarigtu iswaafaqaan.
Diiwaangelinta dokumentiga lagu diro internetka waa mid aad u jaban, munaasib ah, isla markaana kaydinaya waqtigaaga. Dukumiintiga waxaa loo gudbinayaa si amaana waxaana si toos ah aad uheli doontaa xaqiijin rasmi ah oo risiit ah.
Adeegsiga adeegyada elektaroonigga ah waa hab la hubo oo lagu horumariyo howlaha shirkadda. Liistada waxqabadka iyo howlagallada loogala tacaali karo khadka internetka ayaa si joogto ah u koraya. Xidhitaanka, baqshada, dhoofinta iyo kharashkiisa ayaa la iloobi doonaa.
U dir dukumiintiga
Dukumiintiga waxaa loo gudbinayaa si amaana waxaana si toos ah aad uheli doontaa xaqiijin rasmi ah oo risiit ah. dukumiintiyada leh e-saxeex waxay leeyihiin awood sharci oo la mid ah taay ahaan haddii gacanta lagu saxeexay. 128-256 xogta sirta ah ayaa ka ilaalinaysa adiga iyo macaamiishaada faragelinta xogta.
Sideed talaabo oo guusha
Xadhig, baqshadda, dhoofinta oo ay weheliso kharashaadkeeda ayaa la ilaawi doonaa
Internetku si weyn ayuu isu keenaya qandaraasleyaasha, isla markaana saxiixa elektaroonigga ahi wuxuu kuu oggolaanayaa inaad dhammaystirto mashaariicda muhiimka ah adigoon xafiiskaaga ka tegin.
Kaliya u istcimaal saxeex elektiroonig ah inaad arrimaha oo dhan ku xalliso dhowr daqiiqo gudahood!
Waxay badbaadineysaa waqtigaaga. Daabacaada, buuxinta buugga iyo saxiixa dukumintiga ayaan la xirin.
Tayada ugu sarreysa ee dhammaan shahaadooyinka la bixiyo waa dammaanad.
Xaqiijisaa kalsoonida buuxda. Adeegyada la bixiyo waxay waafaqsan yihiin heerka caalamiga ah.
Shahaadadu waxay xaqiijin doontaa ilaalinta hantidaada iyo sumcadda shirkaddaada. Tani waxay awood u siisaa heerar sare oo aamin ah
Dukumiintiga waxaa loo gudbinayaa si amaana waxaana si toos ah aad uheli doontaa xaqiijin rasmi ah oo risiit ah.
Shahaadada aqoonta leh ee lagu soo daray adeegga SimlySign (oo shaqeynaya 1 ama 2 sano) waxay u shaqeysaa si waafaqsan dhammaan adeegyada muhiimka ah ee suuqa, taas oo loo adeegsan karo:
ZUS tabarucaad ah oo ay sahamiyayaashu ku sixiixeen cadeynta
u dirida E-Declaration ama JPK ee loo gudbiyey Xafiiska Canshuuraha
Dhamaadka fog ee heshiisyada sharciga madaniga
in la saxeexo qaansheegyada elektaroonigga ah
u gudbinta foomamka Golaha Rafcaanka Qaranka (Golaha Rafcaanka Qaranka)
gudbinta qirashooyinka dhageysiga maxkamada
gudbinta codsiyada iyo helitaanka wax soo saarista Diiwaanka Maxkamadda Qaranka
xiriirinta GIODO (Kormeeraha Guud ee Ilaalinta Xogta Shakhsiyeed)
u gudbinta U-caddeynta UFG (Sanduuqa Dammaanadda Caymiska)
xiriirinta xafiisyada maamulka dadweynaha
gabagabada heshiisyada sharciga madaniga ah qaab elektiroonig ah
kaqaybqaadashada xaraashka elektiroonigga ah iyo hindisooyinka
isgaarsiinta gudaha nidaamka ePUAP (Platform Elektrooniga ah ee Adeegyada Maamulka Dadweynaha)
Tani waa adeeggii ugu horreeyay ee noocan ah ee lagu bixiyo suuqa Polish, kaas oo:
Wuxuu shaqeeyaa iyada oo aan haysan kaarka jireed iyo akhriska,
Waxay kuu oggolaaneysaa inaad saxiixdo e-Dukumiintiga elektaroonigga ah 24/7 waqti kasta, meel kasta oo adduunka ah,
Waxay ka shaqeysaa labada aaladaha mobilada (Android iyo macruufka) iyo kumbuyuutarrada caadiga ah (PC, Mac OS),
Wuxuu dammaanad qaadayaa amniga hawlgallada tooska ah (u hogaansanaanta eIDAS, xaqiijinta 2-qodobo)
Saxeex aqoon leh ayaa ah hab la xaqiijiyay oo lagu horumariyo ganacsigaaga. Saxiixa elektiroonigga ah hadda waa ganacsi maalinle ah.
(Fadlan ku diyaarso taariikhda kulanka taleefanka)
Waan diyaar nahay
Dhismaha xafiiska GCB
Shuraakada Certum La Idman
Fagaaraha Kashubian Square 8 311
Shahaadada khadka tooska ah
Websaydh loogu talagalay kooxda XWEB | Waxaa ka shaqeeya IBS Poland Xuquuqda daabacaadda © 2013 - 2020 IBS POLAND |Siyaasadda Asturnaanta
Waxaan u isticmaalnaa cookies-ka boggayaga si aan kuu siino khibrada ugu habboon anagoo xasuusnaane waxaad door bidday iyo ku celcelinta booqashooyinka. Adigoo gujinaya "Aqbal" waxaad ogolaatay adeegsiga DHAMMAAN.
Qalabka cookie-ka ACCEPT
Cinwaanka websaydhku waa: https://mobilesignature.eu.
Si aan kuu siin karno agab waxbarasho oo ka sii wanaagsan oo ka sii wanaagsan oo aan kugu siino adeegyo kaafiican oo ka wanaagsan, waxaan u baahan nahay oggolaansho si aan si ka wanaagsan ugu habayno waxyaabaha suuqgeynta ah baahiyahaaga.
Waxaan daneyneynaa arrimahaaga gaarka ah. Xogtaada ayaa amaan nala ah oo waad la noqon kartaa ogolaanshahaaga waqti kasta.
MACLUUMAAD KU SAABSAN xogtaada
Fadlan tixraac xogta soo socota:
Bishii Meey 25, 2018, Xeerka (EU) 2016/679 ee baarlamaanka Yurub iyo Golaha Abriil 27, 2016 ee ku saabsan ilaalinta shaqsiyaadka quseeya howsha macluumaadka shaqsiyeed iyo dhaqdhaqaaqa xorta ah ee xogta noocaas ah, iyo dib u celinta 95/46 / EC (RODO, ORODO, GDPR ama Xeerka Ilaalinta Guud ee Xogta
Si aad u sii waddo bixinta adeegyada adiga oo adeegsanaya websaydhka https://mobilesignature.eu/ waxaan jeclaan lahayn inaanu kugu wargalinno macluumaadka ku saabsan habsamida xogta iyo qawaaniinta lagu fulin doono wixii ka dambeeya May 25, 2018.
Macluumaad noocee ah ayaan ku shaqaynaa?
Xogta la aruuriyay iyadoo la isticmaalayo bartayada internetka https://mobilesignature.eu/ , oo ay ku jiraan ku keydsan cookies.
Maqaallada ku yaal boggan waxaa laga yaabaa inay ku jiraan waxyaabo la soo koobay (tusaale ahaan, fiidiyowyo, sawirro, maqaallo, iwm.). Waxyaabaha ay ka kooban yihiin websaydhyada kale waxay u dhaqmaan si la mid ah sida haddii isticmaaleygu soo booqday degel gaar ah si toos ah.
Waxa ku jira waxyaabaha ka kooban websaydhyada kale
Bogagga ayaa laga yaabaa inay aruuriyaan macluumaadka adiga kugu saabsan, adeegsadaan buskudyada, ku dhejiso nidaamyo raadraac oo dheeraad ah oo dibedda ah, oo ay kormeeraan is-dhex-galkaaga waxyaabaha la socda, oo ay ku jiraan la-socoshada is-dhex-galkaaga shayga xidhan, haddii aad koonto leedahay oo aad gasho goobtaas
Waa kuma maamulaha macluumaadkaaga?
Maamulaha macluumaadkaaga waa IBS Poland Sp. Z o. O. Iyada oo xarun ku leh Gdynia (81-350) Plac Kaszubski 8/311, waxay gashay Diiwaanka Ganacsadayaasha oo hoos yimaada lambarka KRS 0000471089, kaas oo faylasha diiwaangelinta lagu hayo Maxakamadda Gdańsk-Północ | Qeybta Ganacsi ee VII ee Diiwaanka Maxkamadda Qaranka, NIP 586-228-41-33 oo leh raasumaal la wadaago: PLN 50.
Ujeeddadee ayaan u dooneynaa inaan ku hawlgalno xogtaada?
- Waxaan ku hagaajinaynaa waxyaabaha ku yaal bogaggayaga baahiyaha shaqsiyeed waxaana si joogto ah u hagaajineynaa tayada adeegyada la bixiyo, annagoo adeegsanayna falanqaynta xogtaada,
- Ka baaraandegista xogta ayaa noo oggolaaneysa inaan sare u qaadno amniga adeegyada lagu bixiyo websaydhka https://mobilesignature.eu/
Mudo intee leeg ayaanu ka baaraandegi doonaa xogta?
Waxaan ka baaraandegnaa xogta laga bilaabo waqtiga bixinta ogolaanshaha ku habboon ilaa kala noqosho ama codsashada in la joojiyo socodsiinta macluumaadka shakhsiga ah / la codsado ka saarista macluumaadka shaqsiyeed ee milkiilaha. Waxaan ka baaraandegaynaa xogta la soo aruuriyay iyadoo qayb ka ah sumcadda laga bilaabo isla marka aad bilowdo adeegsiga websaydhka https://mobilesignature.eu/, i.e. marka aad gasho websaydhkeenna, ilaa aad ka diidantahay in la caddeeyo.
Ma gudbin karnaa xog?
Websaydhka https://mobilesignature.eu/ wuxuu xogta ku wareejiyaa kaliya hay'adaha ku shaqeynaya ayaga oo matalaya (tusaale, shirkadaha barnaamijyada, iyo hay'adaha loo idmay inay ku helaan iyaga sharciga sharciga waafaqsan, tusaale ahaan maxkamadaha. Xogtaada looma gudbin doono meel ka baxsan aagga dhaqaalaha Yurub mana la wadaagi doono ururada caalamiga ah.
Kumaad la xiriiri kartaa si aad u hesho macluumaad dheeri ah oo laxiriira xogta la socodsiiyay?
Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan xogta shaqsiyeed, fadlan warqad ugu soo dir Kormeeraha Macluumaadkaaga biuro@ibs-24.eu oo ay la socoto qoraalka "GDPR"
Calaamadda foomka RODO ayaa si otomaatik ah loogu dari doonaa foom kasta oo shaqeynaya (tusaale ahaan, foomka xiriirka, faallooyinka),
- Adigoo adeegsanaya foomka, waxaad ogolaanaysaa kaydinta iyo socodsiinta xogtaada barta.
-Wareegtada waa wargelin
Maxay yihiin xuquuqahaaga quseeya xogtaada?
- Waxaad xaq u leedahay inaad gasho xogtaada iyo waxaad xaq u leedahay inaad saxdo, tirtirto, xaddiddo howlaha, xuquuqda aad u leedahay inaad wareejiso xogta, xaq u leedahay inaad diiddo, xaq u leedahay inaad la noqotid ogolaanshaha waqti kasta adigoon saameyn ku yeelan sharciga sharciga ah ee howshaada, kaas oo lagu saleynayay ogolaanshaha ka hor bixitaankiisa. . Ogolaanshaha waxaa laga noqon karaa adoo emayl u diraya cinwaanka biuro@ibs-24.eu cinwaanka uu ogolaanshuhu la xiriiro
- waxa kale oo aad xaq u leedahay inaad dacwad u gudbiso GIODO haddii aad ogaato in ku-shaqeynta macluumaadkaaga shakhsiyadeed ay jabineyso qawaaniinta Xeerka Ilaalinta Xogta Guud ee 27 Abriil 2016.
Maxay yihiin aasaaska sharciga ee lagu habeyn karo xogtaada?
- https://mobilesignature.eu/ waxay u shaqeysaa xogtaada si sharci ahaaneed iyadoo la raacayo qawaaniinta lagu dabaqi karo
- Aasaaska sharciga ah ee loogu talagalay cabbiraadaha tirakoobka iyo suuq geynta ayaa ah waxa loogu yeero Danta sharci ahaaneed ee maamulaha hoostaga Art. 6 sek. 1 il. F GDPR,
Websaydhku wuxuu adeegsadaa cookies, i faylka qoraalka ee ku keydsan kombiyuutarka Adeegga. Xaddidaadaha isticmaalka kukiyada waxay saameyn ku yeelan karaan qaar ka mid ah howlaha laga heli karo websaydhka.
Kukiyadaha lagama maarmaanka u ah gabi ahaanba waxay muhiim u yihiin websaydhku inuu sifiican u shaqeeyo. Qeybtaani waxaa ku jira oo keliya cookies-ka xaqiijinaya howlaha aasaasiga ah iyo amniga websaydhka. Kukiyadaani ma keydiyaan wax macluumaad shakhsi ah.
aan lagama maarmaan ahayn
Kukiyada kasta oo aan si gaar ah ugu baahnayn websaydhku inay u shaqeeyaan oo waxaa loo isticmaalaa si gaar ah si ay u ururiyaan macluumaadka shakhsi ahaaneed ee isticmaaleyaasha iyada oo loo marayo falanqeeyn, xayeysiin, waxyaabaha kale ee la soo galiyay waxaa lagu tilmaamaa cookies-ka aan lama huraanka ahayn. Waa qasab in la helo oggolaanshaha isticmaalaha ka hor intaadan kuxin boggaga internetka.
Kaydi oo aqbal